တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	အိုလံပစ် ကိုချစ်လွန်လို. အင်တာနက်သမားတွေကို ဖမ်းနေတဲ့ စိတ်ပုပ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်၊	July 24, 2008
တိုင်းရင်းသားအသံ အိုလံပစ် ကိုချစ်လွန်လို. အင်တာနက်သမားတွေကို ဖမ်းနေတဲ့ စိတ်ပုပ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်၊ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ. မတူဘူးလား? စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ဘယ်သူဆရာ ဘယ်သူတပည့်ဖြစ်တာကိုပိုင်းခြားလို.မရတဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်နဲ.မြန်မာစစ်အစိုးရ China arrests online dissident in pre-Olympics crackdown By Ben BlanchardWed Jul 23, 9:17 AM ET Chinese police have arrestedaprominent Internet dissident for violating his probation terms,arights group said, as the country steps upapre-Olympic crackdown on dissent to ensure the Games go smoothly.
More than 90 percent of Chinese surveyed by the Pew Research Center’s Pew Global Attitudes Project said they thought the Olympics would help China’s global image, and almost everyone thought the Games would beasuccess. (Additional reporting by Lindsay Beck; Editing by Nick Macfie)